All Ebooks :: Malagasy :: Ny Fahaizana Miandry Ondry (E BOOK)
HomeAll EbooksMalagasyNy Fahaizana Miandry Ondry (E BOOK)
Ny Fahaizana Miandry Ondry (E BOOK)
Raha mpiandry ny andian’ondrin’andriamanitra ianao dia ho ampiana be tokoa noho io asa tena tsara io. Mirakitra ny fampianarana amin’ ny antsipiriany sady voafantina tsara, antoky ny fahombiazanao ireto pejy ireto. Miainga avy amin’ ny traikefa maha-mmpiandry azy nandritry ny telopolo taona...
Raha mpiandry ny andian’ondrin’andriamanitra ianao dia ho ampiana be tokoa noho io asa tena tsara io. Mirakitra ny fampianarana amin’ ny antsipiriany sady voafantina tsara, antoky ny fahombiazanao ireto pejy ireto. Miainga avy amin’ ny traikefa maha-mmpiandry azy nandritry ny telopolo taona mahery i Eveka Dag Heward-Mills, mba hizarana fahazavan-tsaina azo ampiharina ao amin’ ny asa fanompoana.Tokony maniry ny ho tonga mpiandry ny olon’ Andriamanitra ve ianao, ity ilay boky manoro làlana notadiavinao hatrizay.